Hong Kong: Vonjeo Ny Honahonan’i Ha Pak Nai · Global Voices teny Malagasy
Hong Kong: Vonjeo Ny Honahonan'i Ha Pak Nai
Voadika ny 09 Janoary 2018 18:21 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, English
(Marihina fa tamin'ny 15 Septambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Araka ny tatitra iray nivoaka tao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro [ao Hong Kong] (niverina tao amin'ny inmediahk.net), nikasa ny hanangana tetikasa fanorenan-trano goavana tao amin'ny faritra mando voajanahary mahafinaritra indrindra antsoina hoe Ha Pak Na. (下 白泥,), ao Yuen Long ny iray amin'ireo mpandraharaha lehibe indrindra amin'ny fananganan-trano ao Hong Kong. Nahitana trano miisa 122 , trano fandraisam-bahiny miisa 57 misy rihana dimy farafahakeliny, kianja filalaovana golf ary mozea kely ho an'ny bibikely ny tetikasa, ao anatin'ny faritra mando mirefy dimy tapitrisa metatra toradroa. Izany hoe nomena ny orinasa tsy miankina amin'ny maha tetikasa fanorenana an-tanàndehibe azy ity faritra voajanahary ity.
Nandrisika ireo mpamaky azy mba hanao fanoherana an-tsoratra ny fangatahana fahazoan-dàlana fanorenana ny bilaogy People's blog. Ny 26 Septambra 2008 no fe-potoana farany. Nametraka sarintany antserasera nanazava ny tetikasa ihany koa ilay bilaogera .
Nanangana vondrona iray tao amin'ny Facebook i Chan Siu Ming izay nangataka hetsika hanoherana ity tetikasa fanorenana ity. Ireto misy fanehoan-kevitra vitsivitsy nalefan'ireo mpikambana tao amin'ny vondrona.
Judy To: afaka manao zavatra tahaka ny fihetsiketsehana ve isika… manao fanangonan-tsonia mba hanehoana ny tsy fankatoavantsika?????
Trano fonenana tsara tarehy miisa 122 sy trano fandraisam-bahiny miisa 56 ary kianja filalaovana golf … Aorian'izany, hanaraka ve ny bibikely? Atao inona ny mozea ho an'ny bibikely? Mba hiarovana ireo bibikely maty noho ny fahadisoan'ireo namadika antsika?
Nametraka ny drafiny i Kan Cheng:
Ho an'i Loy: Afaka manoratra taratasy ho an'ny EPD (Departemanta Miaro Ny Tontolo Iainana) isika momba izany aorian ‘ny 26 Septambra, kanefa tsy maintsy miresaka momba ny olana ara-tontolo iainana eo amin'ny kianja filalaovana Golf izany. Afaka manao izany aho aty aoriana satria mety tsy mahafantatra akory ity tetikasa ity ny EPD, ary mila fotoana isika mba hanomanana ny tohan-kevitsika .
Ho an'i Him: Izany no antony tokony hanairantsika ny vahoaka, saingy tsy maintsy tsotra izany satria mankasitraka ny fampandrosoana amin'ny fanorenana ny olona ao Hong Kong. Fa raha azontsika atao ny mifandray amin'ireo mpiaro ny tontolo iainana amin'ny lafiny ekolojika na amin'ny fitovian-jo, na zavatra hafa, dia mety tsy hiroso amin'ny fanohanana ilay tetiskasa angamba ny governemanta.
Ho an'i Felix: misy ny ty sy nday -> io no “bonus” [ekolojika] amin'ny tetikasany. Tsy maintsy lazaina fa tsy azon'ny olom-pirenena ampiasaina ireo faritra voajanahary ireo noho ny olana ara-pitaterana, mba hanafoanana ny fangatahana.
Nilaza i Loy Ho fa misy resaka politika ao ambadik'ity lazaina fa tetikasa “ekolojika” ity:
Mbola tsy nisy ny fanorenan-trano ara-ekolojika tao Hong Kong. Tany aloha tany no nisy ireo tetikasa satria hoe tsy niasa teo amin'ny sehatry ny lalàna momba ny tany ny fahalalana ara-tsiantifika momba ny tontolo iainana. Sampana madinika tao amin'ny governemanta ny sampan-draharaha misahana ny tontolo iainana, tsy nanana fahefana hampiato ireo mpandraharaha izy, na dia mandika ny fitsipika momba ny tontolo iainana aza izany. Raha manankarena ny orinasa mba hampandrosoana ny paikady mahomby amin'ny fifandraisan'ny daholobe dia afaka mividy ireo mpanohitra ao amin'ny distrika izy ireo. Tahaka izany no fomba ankatoavana ny tetikasa matetka. Jereo ny zaridainan'ny lolo Fung Yuen na ny tetikasa CLP LNG ohatra. Mazava ho azy ny tetikasa Fung Yuen fa tetikasa fanorenan-trano ao ambadiky ny lainga tsara lahatra. Ny namaritra ny faritra tsy azo kasihina mirefy 50 metatra manodidina ny zaridaina ho an'ny lolo no nataon'ny mpandraharaha .
Tahaka izao no endrik'ilay faritra mando voajanahary ao Ha Pak Nai (avy amin'ny vondrona Facebook ny sary rehetra)
Na any ivelany aza no misy anao dia afaka mandefa taratasy any amin'ny sampan-draharahan'ny fampandrosoana an-tanàndehiben'i Hong Kong ianao na maneho ny tsy fitovian-kevitrao ao amin'ny tranokalan'ny Komitin'ny Fizahan-tany ao Hong Kong talohan'ny 26 Septambra 2008.
Tantaran'ny Hong Kong (Shina) farany
23 Septambra 2021Azia Atsinanana
22 Septambra 2021Azia Atsinanana
18 Septambra 2021Azia Atsinanana